यस्तो छ विमान संग्रहालय, जहाँ पाईलटको ड्रेस लगाएर विमान चढ्न पाईन्छ, संगै छ रेस्टुरेन्ट पनि (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौ -काठमाडौको सिनामंगल स्थित विमान संग्रहालय विद्यार्थी र विमान सम्बन्धी जानकारी लिन चाहने ब्यक्तिको लागि राम्रो गन्तव्य बनेको छ । यहाँ विमान संगै हेलिकप्टर र विमान तथा हेलिकप्टर सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिन सकिन्छ । वेद उप्रेती ट्रस्टले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएको टर्किस एयरको वाइडबडी जहाजमा निर्माण भएको संग्रहालय हो ।
तीनकुने हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ जाँदा सिनामंगलमा पुगेपछि बायाँपट्टिको सडकछेउमै कम्पाउण्डमा एउटा ठूलो बिमान देखिन्छ। झट्ट हेर्दा बिमान बिग्रिएर राखिएको होलाजस्तो लाग्छ। बटुवाहरु के होला? कसो होला? भनेर जिज्ञासा राखिरहेका देखिन्छन्। तर खासमा त्यो ठूलो बिमान ‘बिमान संग्रहालय’ हो ।
सुरुवाती समयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि २०७४ कार्तिक १९ गते नै संग्रहालय खुलेको थियो । संग्राहालय अवलोकनका लागि सर्वसाधरणलाई २ सय ५० तथा विद्यार्थी र अपांगता भएकाहरुका लागि एक सय २५ रुपैयाँ टिकट कायम गरिएको थियो । ५ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई टिकट शुल्क नलाग्ने संग्रहालयमा विदेशी नागरिकले भने पाँच सय रुपैयाँमा अवलोकन गर्न सक्ने ट्रस्टले जनाएको छ । यहाबाट उठेका रकमहरु खर्च कटाएर क्यान्सर पिडितहरुलाई जाने बताईएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ट्रस्टले करिब ७ करोड लगानीमा संग्रहालय संचालनमा ल्याएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय एटीआर विमान प्रशिक्षक तथा विमान चालक उप्रेतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा अवतरण गर्दा दुर्घटना भएको टर्किस एयरको ३३०–३०० को जहाज खरिद गरेर संग्रहालय निर्माण गर्नुभएको हो । टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट काठमाण्डौँका लागि उडेको टर्किस जहाज अवतरणका क्रममा २०७१ फागुन २० गते दुर्घटना भएको थियो ।
यहाँ पाईलटको ड्रेस लगाउन चाहनेहरुका लागि भाडामा पाईलट ड्रेस पनि पाइन्छ । विद्यार्थीको लागि २५ र अन्यको लागि ५० रुपैयाँ तिरेर यो ड्रेस लगाउन सकिन्छ । प्लेनकै तल रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ । जहाँ खाजा खान सकिन्छ । यो संगै खुल्ला चौर र बच्चाहरुको लागि खेल्न पार्क पनि रहेको छ ।